Shiinaha Custom Gym bac-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda duffle Bacda duffle > Bacda jimicsiga
1. Faahfaahinta bacda jimicsiga?
(1) Boorsadan jir dhiska waxaa laga sameeyaa maro naylon Oxford oo biyuhu xiraan.
(3) Cufan oo waara: Wax tayo sare leh oo nylon u adkaysta dunta oo leh naylon xoog leh, sidaa darteed waligood kama jeexi doonaan dusha sare, waxaan u isticmaalnaa jiinyeer tayo sare leh oo tayo sare leh jeeb walba, sidaa darteed waligaa ma dareemi doontid dhibaatooyinka jiinyeerka. faahfaahin kasta si loo sameeyo boorsada guud ee jimicsiga oo tayo sare leh.
(4) Adkaysigu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa aqbalaada go'aamada kama dambeysta ah Waa wax la fahmi karo in la raadsado boorsooyin la isticmaali karo waqti dheer. Bacaha weelka, dhanka kale, waa kuwo aad u adkeysi badan.Hubi in dhar kasta oo aad doorato gabi ahaanba la dhaqi karo oo sahlan in la ilaaliyo.Waa inuu ku hayaa bacda jimicsiga qaabkeedii hore muddo dheer waqtiga.
(5) Iftiin iyo raaxo leh: bacda duffel aad u fudud, oo aan ahayn naqshad aad u tiro badan. Xadhko la hagaajin karo, si aad ugu dhejiso dhererkaaga, ama waad iska bixin kartaa oo kaliya isticmaal xarkaha gacanta lagu hayo, iyo suufka xarkaha ayaa ka dhigaya kuwo raaxo leh inay xirtaan iyagoon qoorta kaa dhaawicin.
(6) adeegga iibka kadib: waxaan bixinaa damaanad nololeed, illaa intaad la kulanto dhibaatooyin tayo leh, fadlan nala soo xiriir annaga oo amraya, walwalna ma qabno markaad wax iibsaneyso!
(7) Waxaa muhiim ah in la go'aamiyo astaamaha iyo suumanka kuugu habboon adiga, caadi ahaan, labada gacmood ee dusha sare ee boorsada ayaa si fiican u shaqeeya. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay rabaan inay yeeshaan suun dheer oo ka soo laalaada hal garab, halka kuwa kalena laga yaabo inay Boorsooyin u eg-boorso oo leh laba garbood ayaa sidoo kale la heli karaa.Haddii boorsadaadu culays saareyso garbahaaga, waxaa fiican inaad doorato boorsada jirka, oo dhinac la dhigi karo halkii aad hal garab oo keliya isku xoqi lahayd. Bacaha ayaa ku fadhiisanaya miskahaaga si loo yareeyo taabashada jirka waxayna kuu siinayaan fursad wanaagsan inaad si dhaqso leh u lumiso kuleylka.Sida noocyada kale ee leyliska jimicsiga, waa inaad weli si taxaddar leh uga fikirtaa waxa aad sidato oo aad qaadatid waxaad u baahan tahay si aad uga fogaato inaad geliso wax aan loo baahnayn culeyska garbahaaga.
(8) Ku habboon jimicsiga ama nashaadaadka isboortiga: Bacdan waxaa loo isticmaali karaa jimicsi, isboorti iyo waxqabadyo dabaal ah, iyadoo leh qol ku filan oo lagu xareeyo kabaha, dharka lagu dabaasho, sabeynta iyo bambooyin. waxaa jira jeebado badan oo wax ku ool ah, sidaa darteed waxaan si fudud uga furi karnaa taleefannada gacanta, furayaasha, boorsooyin iyo waxyaabo kale oo qiimo yar. Waxyaabaha ku jira boorsadani waa mid aad u fudud oo xoog badan.
(9) Wanaagsan safarka: Waxaad u qaadan kartaa boorsadan meel kasta adigoon ka walwalin inaad ka tagto booska boorsada.Waxay ku imaaneysaa suunka garbaha (oo leh garabka garbaha), gacantuna waxay leedahay barkimo jilicsan oo dusha sare ee boorsada ah si ay wax u fududaato cabirkaani wuxuu ku habboon yahay diyaaradaha, safarka, iyo boorsooyinka.Waxaa jira dhowr qaybood oo kala go 'ah, way fududahay in gudaha la soo galo si loo abaabulo ama loo soo qaado waxyaabaha la keydiyay. fududahay in la isticmaalo qalabka safarka.
2. Halbeegyada Waxsoosaarka Bacda Fitness (Tilmaamaha)
3. Maxaa la tixgeliyaa ka hor intaadan iibsan boorsada jimicsiga?
(1) Haddii aad safreyso ama aad aadeyso qolka jimicsiga, boorsada jirdhisku waa hab fiican oo alaab aad u qaadan karto. ha ku xirin meel walba, waqti kasta.Waad ku mahadsantahay boorsada jimicsiga, taasi maahan wax dhibaato ah. Shandadu way jilicsan tahay, sidaa darteed waxay soo qaadan kartaa waxyaabo badan waxayna geli kartaa meelo kala duwan. .
(2) Haddii aad iibsaneysid boorsada jimicsiga oo leh qol kabo ah, waxaad dooneysaa inay sii dheeraato in ka badan hal usbuuc.Bacaha qaarkood waxay u muuqdaan kuwo qurxoon banaanka, laakiin waxay kuxirantahay sheyga, si fudud ayey u kala bixi karaan ama u jeexi karaan. Shandad waarta oo socon doonta jimicsiyo badan ama safarro isbuuc dhammaad ah, sax? Gaar ahaan, boorsooyinka laga sameeyay naylonka aan xabbadu karin waxay leeyihiin nolol dheer, markaa nasiib wacan haddii ay tahay inaad jeexdo! Haddii aad raadineyso alaab muddo dheer soconeysay, naylon xaqiiqdii waa xulasho wanaagsan, markaa ka taxaddar markaad wax iibsaneyso.
(3) Waxyaabaha ku jira boorsadaada jimicsiga ayaa ka muhiimsan sida aad u maleyneyso. Maaddadu waxay go'aamineysaa oo kaliya sida ay nadiif u tahay bacda, laakiin (ka sii muhiimsan) sida ay u waari karto. xitaa wuu ka xoog badan yahay tolmo adag iyo xarkaha taageerada adag.
(4) Waxaad sidoo kale ubaahantahay boorsada jimicsiga oo si fudud loo nadiifin karo. Dhidid, daadin, sidaa darteed waxaa ugufiican in loo diyaar garoobo. Iibsashada boorsada jimicsiga dumarka oo leh qol kabo waa wax fiican oo quruxsan ilaa ay qasan tahay. Hubso inaad boorsooyin iibsato in si fudud loo tirtiri karo loona nadiifin karo biyo iyo saabuun fudud.
(5) Qaar ka mid ah bacaha jimicsiga ayaa xirxiran kara wax aad u badan oo aan macquul aheyn in la qaado maxaa yeelay waad buuxsantay.Tani waxay xitaa u horseedi kartaa dhaawacyo dhabarka ah, oo aan ahayn waxa aad rabto. In kastoo giraangiraha ay ku darayaan mugga shandadaada, waa u qalantaa mugga dheeriga ah haddii aad qorsheyneyso inaad alaab culus qaado.
(6) Boorsada weyn ee jimicsiga waxay qaadi kartaa in ka badan 155 litir, oo u dhiganta waxyaabo badan.Sidaa darteed haddii aad u baahato boorso qaadi kara daloollo fara badan, u bax oo soo iibso boorso weyn oo jimicsi. aadista qolka jimicsiga ama si dhakhso leh habeen, waxaad isticmaali kartaa boorso yar oo jimicsi ah si aad ugu kaydiso waxyaabaha aad ugu baahan tahay jimicsigaaga ama habeenkiinna.
(7) Kahor intaadan go'aansan inaad mid iibsato, fadlan tixgeli qodobo kala duwan, sida ujeedada, helitaanka, adkeysiga, moodada, qiimaha iyo tayada boorsada.Haadi astaamaha aasaasiga ah sida awooda, nidaamka xiritaanka iyo tolida.
(8) Guud ahaan, waxaa jira arrimo badan oo ay tahay in la tixgeliyo marka la dooranayo boorsada jimicsiga. Raaxada, adkeysiga, ku habboonaanta iyo qaabka ayaa dhammaantood ka mid ah go'aankaaga. boorso!
(3) Waxaan qaabeyn karnaa habka xirmooyinka keydinta xamuulka oo badan, laakiin tani waxay u hureysaa waxyaabo qaar, waxay sababi kartaa muuqaalka isbedelka sheyga, guud ahaan kuma talineyno macaamiisha inay adeegsadaan qaabkan.
(4) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa habka xirxirashada boorsadaan baseball iyadoo la raacayo shuruudahaaga.
(5) Hadaad ubaahantahay shaybaarka boorsadan baseball-ka, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(6) Xajmiga cabbirka ee caadiga ah: 42cm dheer X 27cm sare X 25cm ballaaran, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(7) Faahfaahinta xirxirida: 45cm X26cm X 45cm.10PCS / box.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
Calaamadaha kulul: Bacda jimicsiga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka